ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ရယ်စရာဟာသများ
ညချစ်သူ | 11:18 PM | ဟာသ
ညချစ်သူ | 11:18 PM |
“ ရှေ့နေများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများ ”
ရှေ့နေ သုံးယောက်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ သုံးယောက်တို့ အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက် ရထားဖြင့် ခရီးထွက်ကြသည်။ ဘူတာသို့ရောက်သောအခါ ရှေ့နေ ၃ ယောက်က လက်မှတ် ၃စောင် ဝယ်နေသည့်အချိန်တွင် အင်ဂျင်နီယာများကလက်မှတ်
“ လူ ၃ ယောက်ကို လက်မှတ်တစ်စောင်တည်းနဲ့ ခရီးဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲ ” ဟု ရှေ့နေတစ်ယောက်ကမေးလိုက်သည်။
“ စောင့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဗျာ ”
ဟု အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်က ပြန်ပြောသည်။
ရထားပေါ်တက်ကြသည့်အခါ ရှေ့နေသုံးယောက်က ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာခုံနံပါတ်မှာထိုင်နေကြသည့်အချိန်တွင်
အင်ဂျင်နီယာသုံးယောက်က အိမ်သာခန်းထဲသို့ သုံးယောက်စလုံးတိုးကျိတ်ဝင်ကြပြီး တံခါးပိတ်ထားလိုက်သည်။
လက်မှတ်များ လှည့်လည်သိမ်းဆည်သောအချိန်တွင် လက်မှတ်စစ်သောသူက အိမ်သာတံခါးကိုခေါက်၍ပြောလိုက်သည်။
“ ကျေးဇူးပြု၍ လက်မှတ်ပေးပါခင်ဗျာ ”
တံခါးနည်းနည်းလေးဟသွားပြီး လက်မှတ်ကိုင်ထားသော လက်တစ်ချောင်းထွက်လာသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်သော ရှေ့နေတို့က အင်ဂျင်နီယာတို့၏ ပါးနပ်လိမ္မာမှုကို သဘောကျကြသည်။
အစည်းအဝေးပွဲမှ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ဒီနည်းကို သုံးဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဘူတာသို့ရောက်သောအခါ ရှေ့နေသုံးယောက်က လက်မှတ်တစ်စောင်ပဲဝယ်ကြသည်။ အင်ဂျင်နီယာ များက လက်မှတ်တစ်စောင်မှမဝယ်ကြပေ။ ဤသည်ကို ရှေ့နေတစ်ဦးက အံ့သြ၍
“ မင်းတို့လက်မှတ်တစ်စောင်မှမဝယ်ဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ပြန်မလဲ ” ဟုမေးရာ
“ စောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ ”
ရှေ့နေသုံးယောက်က အိမ်သာခန်းထဲသို့ သုံးယောက်စလုံးတိုးကျိတ်ဝင်ကြပြီး တံခါးပိတ်ထားလိုက်သည်။
အင်ဂျင်နီယာသုံးယောက်က တစ်ခြား အိမ်သာခန်းတစ်ခုထဲသို့ဝင်သွားကြသည်။
ရထားစထွက်ကာစမှာ အင်ဂျင်နီယာတွေထဲက တစ်ယောက်ကသူ့အခန်းထဲမှထွက်လာပြီး တစ်ခြားအိမ်သာတံခါးကို
“ ကျေးဇူးပြု၍ လက်မှတ်ပေးပါခင်ဗျာ! ”
“ လွယ်ပါတယ်သားရယ် Facebook မှာ ဖွပေးမယ် ”
ပန်းခြံထဲကခုံလေးမှာ သားအဖနှစ်ယောက်ထိုင်နေကြသည်။ ထိုအချိန် ရေခဲမုန့်ရောင်းသူ ဖြတ်သွားလေရာ အလွန်ပူဆာတတ်သောကလေးက
“ ဖေဖေ သားရေခဲမုန့်စားချင်တယ် ”
ဒီလိုနှင့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က စကားပြောရင်းလမ်းလျှောက်လာသည်။
“သြော် လွယ်ပါတယ်သားရယ် အဖေ Facebook မှာ
ဖွပေးမယ် ! ! !”
“ အားတွေလျော့ ကုန်မယ် ”
“ နာရီထဲက ဓါတ်ခဲတွေကို ဘာဖြစ်လို့ ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီး အပြင်မှာသိမ်းထားတာလဲဗျ ”
“ ဓါတ်ခဲသက်တမ်းအကြာကြီးခံအောင်လို့ပါ။ အချိန်ကိုသိချင်ပြီဆိုရင် ဓါတ်ခဲကိုပြန်ထည့်တယ်လေ။ ! ! !”
“ နာကြားရပြီ ”
ပထမလူ။ ။ နားကြပ်အသစ်ဝယ်ပြီးကတည်းက နှစ်ခန်းကျော်က ပြောတာတောင်ကြားရတယ်ဗျ
ဒုတိယလူ။ ။ ဟုတ်လား။ တယ်ကောင်းတာပဲ။ ဘယ်လောက်ပေးရလဲဗျ။
ပထမလူ။ ။ ၃ နာရီထိုးပါပြီ ! ! !။
“ လင်ပျောက်ရှာနေသော မိန်းမ ”
မိန်းမ >> ကျွန်မယောင်္ကျားပြောက်သွားလို့
Inspector >> သူ့အရပ်က ဘယ်လောက်လဲ
မိန်းမ >> တစ်ခါမှ သတိမထားမိဘူး
Inspector >> ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လား ကျန်းကျန်းမာမာလား
မိန်းမ >> မပိန်ပါဘူး ကျန်းကျန်းမာမာပါပဲ
Inspector >> မျက်လုံးကဘာရောင်လဲ
မိန်းမ >> မမှတ်မိဘူး
Inspector >> ဆံပင်ရောင်ကရော
မိန်းမ >> ရာသီအလိုက်ပြောင်းနေတာပဲ
Inspector >> ဘာဝတ်ထားလဲ
မိန်းမ >> ထသွားထလာ ဝတ်ထားတာပဲ သေချာမမှတ်မိဘူး
Inspector >> သူနဲ့အတူဘယ်သူပါသေးလဲ
မိန်းမ >> အိမ်မွေးခွေးလေပါသွားတယ်၊ နာမည်က ဆွီတီ။ ရွှေရောင်ချိန်းကြိုးနဲ့ ချည်ထားတယ်။
အရပ်က လက်မ ၃၀၊ ခန္ဓာကိုယ်က ထွားကြိုင်းတယ်၊ အပြာရောင်မျက်လုံး၊ မီးခိုးရောင်အမွှေးနဲ့၊ ဘယ်ဘက်ခြေထောာက်ရဲ့ခြေမက ခြေသည်းလေးနည်းနည်းကျိုးနေတယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ မဟောင်ဖူးဘူး။ အပြာရောင်ဘောလုံးပါတဲ့ ရွှေရောင်ပါတ်ကြိုးလေးပါတ်ထားတယ်။ သူက အသီးအရွက်မကြိုက်ဘူး၊ ငါတို့ကအတူသွား အတူစားခဲ့ကြတာလေ
စကားပြောပြီးနောက် မိန်းမ ကစ၍ ငိုပါတော့သည်
Inspector >> ကောင်းပြီ ခွေးကို အရင်ရှာကြစို့ !!!
“ နေမကောင်းနေသောကလေးနှင့် သူ၏အမေ ”
ကလေးကသူ့အမေထံသို့ ဗိုက်နာနေကြောင်း ငိုပြီးလာပြောသည်။
“ ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိလို့နာတာ လာဒီမှာ တစ်ခုခုလာစား ”
ဟုပြောလိုက်ရာ ကလေးက နားထောင်သည်။
နောက်တစ်နေ့တွင် အမေဖြစ်သူက ခေါင်းတွေနာနေသည်။ ကလေးက ဖြေသိမ့်သည့်အနေနှင့် ပြောလိုက်သည်။
“ အဲ့ဒါ ဦးဏှောက် မရှိလို့ဖြစ်တာ ”
ကလေး >> “ အမေ့ ခေါင်းကဆံပင်တွေဘာလို့ဖြူလာတာလည်းဟင် ”
အမေ >> “ အဲ့ဒါမင်းကြောင့်ပေါ့ကွဲ့ မင်းမလိမ္မာရင်ငါ့ဆံပင်တွေဖြူကုန်ရော ”
“ အဖွားဆံပင်တွေဘာ့ကြောင့် ဖြူနေတာလည်း ကျွန်တော်အခုသိပါပြီ ! ! !”
“ ၄၅ ဘတ်စ်ကား ”
အသက် ၅၀ ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ရန်ကုန်သို့ အလည်အပါတ်ခရီးသွားရန် ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည်။ လှည်းတန်းကို သွားခဲ့ရာ ကံဆိုးချင်တော့ လှည်းတန်းလမ်းဆုံကို သူရှာမတွေ့ခဲ့ပေ။ ဒီလိုနှင့် ယဉ်ထိန်းရဲကို အကူအညီတောင်းရတော့သည်။
အမျိုးသမီး >> ကျေးဇူးပြုပြီး လှည်းတန်းကို ဘယ်လိုသွားရလည်း လမ်းညွှန်ပေးပါရှင်
ယဉ်ထိန်းရဲ >> ၄၅ ကားကိုဒီကားဂိတ်မှာစောင့်ပါ။
အမျိုးသမီးက ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်သည်။ ယဉ်ထိန်းရဲလည်း ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတော့သည်။
၃ နာရီလောက်ကြာသောအခါ ယဉ်ထိန်းရဲက ထိုနေရာသို့ပြန်လည်ရောက်လာသည်။ အမျိုးသမီးကထိုကားဂိတ်မှာပင်စောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယဉ်ထိန်းရဲကအမျိုးသမီးဆီသို့သွား၍ပြောသည်။
“ လှည်းတန်းကို ရောက်ဖို့ ၄၅ ကားကိုစောင့်စီးရမယ်လို့ကျွန်တော်မှာထားခဲ့တယ်နော် အခု ၃ နာရီတောင်ကြာနေပြီဗျ ဘာ့ကြောင့်အခုထိစောင့်နေတာတုန်း ”
“ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ အရာရှိကြီးရယ် သိပ်မကြာတော့ပါဘူး အခုဖြတ်သွားတဲ့ကားက အစီး ၄၀ မြောက်ပါ ! ! ! ”
ပထမလူ။ ။ ငါ့သားက ငါ့ပြောစကားနားမထောင်ဘူးကွာ
ဒုတိယလူ။ ။ သူကမလိမ္မာလို့လား?
ပထမလူ။ ။ နားပင်းနေတာကွ။
ပထမအမျိုးသမီး။ ။ ဒုက္ခပါပဲဟယ်။ ငါ့ချစ်သူနဲ့ အခုလမ်းလျှောက်လာနေတာ ငါ့ယောင်္ကျားပဲ
ဒုတိယအမျိုးသမီး။ ။ အေးဟယ် ငါလည်း နင့်လိုပါပဲ
By: အောင်မျိုးခန့် (မော်ကျွန်း)
Posted by ညချစ်သူ at 11:18 PM